Shiinaha afar warshad Robot Taxanaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Daya
Afar taxane robot dhidibka JZJ100B-230 100KG
Afar taxane robot dhidibka JZJ25B-180 25KG
Afar taxane robot dhidibka JZJ15B-140 15KG
Hordhac kooban oo aalado otomaatig ah oo otomaatig ah:
1. Robotka rarka iyo dejinta wuxuu leeyahay xamuul fara badan oo u dhexeeya dhowr kiilo ilaa dhowr boqol oo kiilo;
2. Xawaaraha socodku waa dhakhso oo la hagaajin karaa;
3. Ficil dabacsan, wuxuu dhammaystiri karaa maaraynta iyo rarka iyo dejinta hawlaha adag;
4. Kalsoonida sare iyo dayactirka fudud.
5. Waxay dhameystiri kartaa dhaqdhaqaaqa sedexda geesoodka ah ee walxaha culus sida qabashada, gaadiidka, rogida, ku xirida iyo wixii la mid ah. Waxay bixisaa qalab ku habboon maaraynta iyo isku-dubbaridka qalabka on-line-ka iyo isku-xirnaanta qaybaha wax soo saarka. Robot-ka rarka iyo dejinta ayaa yareyn kara xoogga foosha isla markaana bixin kara maareyn ammaan ah. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale la kulmi kartaa bey'adda gaarka ah, sida meelaha halista ah ee shaqaalaha aqoon isweydaarsiga aan qarxin karin soo geli karin, waxayna siisaa xalal nidaam.
6. Iyada oo la adeegsanayo qalab kala duwan oo aan caadi ahayn, ayaa aaladda robotku waxay qaban kartaa qaabab kala duwan oo loo yaqaan 'workpiece', hawlwadeenkuna si sahal ah ayuu u kicin karaa una dejin karaa culeyska, dhaqaajin karaa, u rogi karaa, horay u soo laaban karaa oo is rogi karaa. Oo rarka si dhakhso leh oo sax ah ayaa loo dhigaa booska hore. Iyada oo ay ku jirto, hal qof ayaa si fudud ugu shaqeyn kara waxyaabaha ay dad yar uun dhaqaajin karaan.
Afarta dhidibka Robot Taxanaha Halbeegyada Farsamada
Maxay yihiin faa'iidooyinka ugu waaweyn ee aalado gaadiidku adeegsadaan?
1. Robot-ka lagu xirxiro oo lagu maareeyo ayaa fadhiya meel yar, taas oo ku habboon qaabeynta khadadka wax-soo-saarka ee aqoon isweydaarsiga macaamiisha, wuxuuna keydin karaa aag weyn oo bakhaar ah. Robot-ka waxaa si hufan loogu meeleyn karaa meel cidhiidhi ah.
2. Raaxaynta iyo rarida aaladaha waxay leedahay qaab dhismeed fudud iyo qaybo kooban. Sidaa darteed, qalabka dayactirka wuxuu leeyahay heer hoose oo gaabis ah, waxqabad la isku halleyn karo, dayactir fudud iyo qaybo kooban oo dayactir ah.
3. Awoodda isticmaalka pallataynta iyo maaraynta robotku way hooseysaa. Xaaladaha caadiga ah awgood, awoodda palletizing iyo gudbinta aalado waxay ku saabsan tahay 26KW, halka awoodda mashiinka lagu rakibay ay ku saabsan tahay 5kW. Si weyn u yaree kharashka hawlgalka ee macaamiisha.
4. Rugta lagu shubo oo lagu maareeyo ayaa leh ku-ool xoog leh. Marka cabirka, mugga, qaabka badeecada macaamilka iyo qaabka iyo cabirka santuuqa isbeddelayo, waxsoosaarka caadiga ah ee macaamilka saameyn kuma yeelan doono isbeddel yar oo shaashadda taabashada ah. Dib-u-dhiska palletizing iyo daabulida aaladaha waa mid aad u dhib badan, xitaa lama xaqiijin karo.
5. Dhammaan kontaroolada rooti-gashiga iyo gacan ku haynta waxaa lagu shaqeyn karaa shaashadda golaha kontoroolka, hawlgalkuna waa mid aad u fudud.
6. Ilaa iyo inta la go'aaminayo barta bilowga iyo meelaynta, habka waxbaridda waa fududahay in la fahmo.
Hore: C Frame Servo Press (taxanaha STA)
Xiga: Lix taxane Robot Taxanaha